अनूदित कथा : मेरी आमाले काम गर्नुभएन - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : आकाश हराइसकेको छ
कविता : सावधान ! कुकुर वहुलाएको छ। →
कती पटक पढियो : 168
~डोन्ना स्मिथ याकेल~
अनु : महेश पौड्याल
“हजुर, यो कहाँ पर्यो होला?”
“मैले किन फोन गरेकी हुँ भने, मेरी आमाको भर्खरै देहावसान भयो….मलाई हजुरको अफिसमा फोन गरेर समाजिक सुरक्षा वापतको …. त्यो खै के भन्छ….त्यो के पो… रकमको चेक पाउन सकिन्छ कि भनेर बुझ्न भनिएको छ ।”
“हजुर….थियो । उहाँ अठहत्तर हुनुहुन्थ्यो ।”
“स्मिथ । मार्था स्मिथ । मार्था रुथ स्मिथ पो लेख्नुहुन्थ्यो कि क्या हो! कहिलेकाहीँ त विवाहपूर्वको नाम…मार्था जेराबेक स्मिथ पनि लेख्नुहुन्थो ।”
उहाँले बुवालाई र बुवाले उहाँलाई लेखेका प्रेमपत्रहरू एउटा पुरानो बाक्सामा छन्, रिबोनले या सुकेर अरहरो बनेको छालाको लोतीले बाँधेर राखेका । ती पत्रहरू १९१८ देखि १९२० सम्म लेखिएका हुन् । आमाका पत्रहरू त्यसै पलसलका कागजहरूमा लेखिएका छन् जसलाई उहाँले पूर्णकालिन खटेर एकलरुपमै सञ्चालन गर्नुभएको थियो, १९७३ मा स्कुलको पढाइ सकेर । बुवाका पत्रभने प्रथम विश्वयुद्धताका सैनिक र नाविक क्लबमा रहेर लडने लडाकुहरूलाई पत्र लेख्न दिइने कागजमा लेखिएका छन् । बुवाले आमालाई पत्रमार्फतै भावुक प्रस्तावहरू राखेर फकाउनुभयो । आमाले उहाँका सबै भावनाहरूको कदरपूर्ण उत्तर दिनुभाएको भए पनि उहाँ विवाहबाट सारै नै डराउनुहुन्थ्यो…
“म बिहेको मिति तय गर्नुपर्ने भनेपछि मरिहाल्छु – कुरो त्यतिमात्रै हो । म विगतका दुई वर्षदेखि यही कुरा सोचिरहेकी छु । मैले तपाईलाई कइयौंपल्ट भनिसकें, म वैवाहिक जीवनबाट डराउँदिन । तर बिहेको मिति तय गर्ने कुरो, र म विहाहित महिला हुने र आधा दर्जन या त्योभन्दा पनि बढी केटाकेहीको रेखदेख गर्नुपर्ने कुरा सोच्दा त….बिरामी नै हुन्छु । यतिखेर मेरा आँखा रसाएका छन । तर आशा गर्छु, कुनै दिन म आफ्नै अतीतलाई सम्झेर भन्न पाउने छु, ‘धत्तेरी! बिहेबाट पनि डराउने, म कति लाटी ।’ ”
उहाँहरू अरु नै कसैको खेत कुतमा गर्नुहुन्थ्यो । आफ्नो काम सकेर बुवा अन्य दुई खेतमा पनि भारोपर्म गर्न जानुहुन्थ्यो । सुरुमा उहाँहरूसँग पुञ्जी थिएन, र बिहानदेखि मध्यरातसम्म हाँजिरा गरेर कमाउनुपर्थ्यो । सहरमा हुर्किएकी मेरी आमाले हाँसकुखुरा पाल्न, चल्ला हुर्काउन, सुँगुरलाई दानापनी खुवाउन, दूध दुहुन, करेसाबारी गोडमेल गर्न, फलफूलको अचार हाल्न, र मागेर ल्याएको तरकारी केलाउन सिक्नुभयो । लगभग चारसय मिटरजति पर रहेको कुवाबाट पानी बोक्नुभयो, ती ठूल्ठूला खडकुँला भरेर लुगा धुन । अन्न निफन्न सिक्नुभयो, धान झार्ने मसिनमा बीटा हाल्न सिक्नुभयो, अन्नको कुन्यू लाउन र बत्ताउन सिक्नुभयो र खेतालालाई खाजा खुवाउनुभयो । सेप्टेम्बर १९२५ मा उहाँहरूको तेस्रो सन्तान जन्मियो, र जुन १९२७ मा चौथो । यी दुबै छोरी थिए । १९३० सम्ममा आफ्नै जग्गा किन्न पुग्ने पुञ्जी जम्मा भयो र मेरा बुबाआमाले खेत किन्नुभयो । फलस्वरुप, त्यसैसाल मार्चमा उहाँहरू आफ्ना गाइबस्तु र मालसमान लिएर, धुलौटो बाटो, ५५ माइल टाढा रहेको गाउँमा बसाइँ सर्नुभयो ।
अर्को साल सुक्खाको मार । बुवा कुआबाट कुखुराको खोर, कुआबाट गौचरन, कुआबाट गोठ, कुआबाट बगैंचा, दौडादौड गरिरहनुहुन्थ्यो । घाम, दिन–प्रतिदिन चर्कौ हुँदै गइरहेको थियो । अन्नबाली सुकेर ध्वस्त भइरहेका थिए । किसानहरूले आधा बाली भित्र्याए, आधा जमिनले भित्र्यायो । पराल र कुसौरो गाईबस्तुलाई । फलेको अन्न पनि नाममात्रको; बजारमा कौडीको मोल पनि अनाउने । उनीहरू सित्तैंमा बजारमा फ्याँक्न सक्तैनथे पसिनाको कमाइ, त्यसैले घरै राखे, जाडोका दिनहरूमा अँगेनोमा बालेर तापे ।
हिउँदमा उहाँ रातभरि सिलाइ–बुनाइ गर्नुहुन्थ्यो, अविश्राम — छरछिमेकबाट पुराना लुगा मागेर । पुराना कोट, लुगाफाटा, चोली र सुरवालहरू काट्कुट पारेर आफ्ना चार सन्तानहरूलाई ठिक्क हुनेगरि सिउनुहुन्थ्यो । हरेक बिहान र साँझ गाई दुहुनुहुन्थ्यो, सुँगुर र बाछाबाछीलाई दानापानी खुवाउनुहुन्थ्यो, खुकुरालाई चारोपानी खुवाउनुहुन्थ्यो, अण्डा टिपेर सञ्चित गर्नुहुन्थ्यो, खाना पकाउनुहुन्थ्यो, भाँडाकुँडा माँझ्नुहुन्थ्यो, भैं पुछ्नुहुन्थ्यो, र छोराछोरीको स्याहार–सुसार गुर्नुहुन्थ्यो । वसन्तमा फेरि कसेरोबारीमा तरकारी लगाउनुहुन्थ्यो, जसका लागि र परिवारका लागि टाढाबाट पानी ओसार्नुहुन्थ्यो । १९३६ मा उहाँको छ महिनाको गर्भ पतन भयो ।
१९५९ मा आमाको अन्तिम सन्तानले माध्यमिक शिक्षा सक्यो । एक वर्षपछि गाईबाछा बेचिए । हाँसकुखुरा पाल्ने काम भने आमाले जारि नै राख्नुभयो । अझै पनि भुत्ला उखेल्ने, सिरानी बनाउने, आफ्नो रोटी आफैंले पकाउने, र हरेक वर्ष विवाहित सन्तानका लागि या नातिनातिनाका लागि सिरक बनाउने क्रम टुटेन । अनि उहाँको करेसाबारी – जीविकाको त्यो विशाल, कालजयी प्रतिक – विगतका वर्षको जस्तै ठूलो, र स्याहारिएको थियो । अचार हाल्ने, र बिजुली भित्रिएपछि सुरु भएको फलफूल र तरकारी फ्रीजमा राखेर जतन गर्ने क्रम पनि निर्वाद चलि नै रह्यो।
१९७० मा उहाँका श्रीमान – मेरा बुवा – को मृत्यु भयो । आमाले जीवमा थप सवलता, मर्यादा र व्यवस्थाकालागि कठोर परिश्रम गर्नुपर्यो । शारिरीक पुनरोत्थानकेन्द्रमा उहाँलाई व्यायाम गराउने र ह्विलचेयरमा आरामदायी तरिकाले बस्न सिकाउने एकजना चिकित्सकले मलाई भनिन्, “आज उहाँले पन्द्र पटक पुस–अप गुर्नभयो, पन्द्र पटक । उहाँ पचत्तर वर्षको हाराहारीकी हुनुहुन्छ । यतिको उमेरमा यति तागतिलो महिला मैले कहिल्यै कतै देखेकी थिइनँ ।”
“मैले तपाईकी आमाको नाउँ फेलापारें जस्तो छ । मार्था रुथ स्मिथ; बेन एफ. स्मिथकी धर्मपत्नी ।”
“हुुनुहुन्न? किन र?”
(प्रस्तुत कथा “विमेन, ए जर्नल अफ लिबरेशन” नामक नारीप्रधान पत्रिकामा सन १९७५ मा प्रकाशित भएको थियो । निजात्मक अनुभवमा आधारित यो कथा नारीहरूको कामका बोरेमा समाजले राख्ने अवधारणाहरूप्रति व्यङ्ग्य हो । क्यानाडाको संघीय कानूनका अनुसार गृहिणीहरू कि जागिरे भएका कारण, की जागिरे श्रीमानका पत्नी भएका कारण सामाजिक सुरक्षा वापतको रकमका भागिदार हुन्छन् । त्यसैले विसुद्ध गृहिणीहरू यो सेवाबाट वञ्चित हुने गर्दछन् । प्रस्तुत कथाले यस्ता अन्यायपूर्ण कानूनको भत्र्सना गरेको छ ।)
This entry was posted in अनूदित कथा and tagged Donna Smith-Yakel, Mahesh Poudel 'Prarambha'. Bookmark the permalink.